Otu esi etinye GNOME 40 na Ubuntu 21.04 - LinuxCapable
Otu esi etinye GNOME 40 na Ubuntu 21.04
August 20, 2021 by Jọshụa James
Ịdọ aka ná ntị na GNOME 40 maka Ubuntu 21.04
Wụnye PPA maka Gnome 40
Ịwụnye Gnome 40
Banye na Gnome 40
N'ime nkuzi a, ị ga-amụta ka esi etinye ihe ọhụrụ GNOME 40 na sistemụ arụmọrụ Ubuntu 21.04 gị.
Emebere nkuzi a iji kwalite sistemụ arụmọrụ Ubuntu 21.04 gị gaa na desktọpụ GNOME kachasị ọhụrụ nke onye kere ihe a nyere. Reddit post. GNOME 40 anaghị eguzosi ike ma ọ naghị akwụsi ike n'ihi na a na-ewughachi ugboro ugboro nke a na-eme ma nwee ike imebi. Iji nweta ọnụ ọgụgụ kasị elu ma ọ bụ jiri sistemụ, ị gaghị eche na ịwụnye Ubuntu ma ọ bụrụ na ihe na-aga ube. Kpachara anya!
OS akwadoro: Ubuntu 21.04 Hirsute (Enweghị ike iji ụdị ọ bụla ọzọ)
Nzọụkwụ mbụ tupu ịwụnye Gnome na Ubuntu bụ ibubata PPA ppa: shemgp/gnome-40. Ekwesịrị ịmara na nke a abụghị PPA gọọmentị ma na-echekwa ya maka elu, nke nwere ike imebi dị ka akọwara na mmalite nke nkuzi.
Iji tinye PPA, jiri iwu a:
Pịa tinye igodo aga n'ihu.
Ozugbo ebubatara, melite ndepụta nchekwa gị iji gosipụta PPA agbakwunyere ọhụrụ.
Ọbụlagodi na sistemụ arụmọrụ Ubuntu 21.04 emelitere, ị ga-achọpụta na mgbe ị wụnye PPA wee jiri iwu mmelite dabara adaba, ọtụtụ ngwugwu ga-adị mkpa ka emelite ya.
Tupu ị wụnye Gnome 40, ị kwesịrị ịkwalite ngwugwu ndị a na-adaberekarị:
Na-esote, wepụ ma hichaa ndabere na-ejighị ya bụ nke fọdụrụ:
Ịwụnye ma ọ bụ kwalite Gnome mara mma kwụ ọtọ. Nke mbụ, ị ga-etinyerịrị mutter njikwa Window Gnome site na iji iwu njedebe ndị a:
Na-esote, wụnye ngwugwu gnome-shell na gnome-session:
Iji nyochaa nwụnye ozugbo emechara, jiri ihe ndị a:
Ozugbo arụnyere ihe niile, ị ga-amalitegharị sistemụ arụmọrụ gị ka mgbanwe wee dị ka ndị a:
Ozugbo ị laghachiri na ihuenyo nbanye, nke ị ga-achọpụta na ọ dị nnọọ iche ugbu a, ị ga-ebu ụzọ pịa obere akara ntọala cog dị n'akụkụ aka nri wee họrọ ya. GNOME na Xorg. Site na ndabara, ọ ga-eme ka Ubuntu họrọ, ị ga-agbanwe nke a, ma ọ bụ na desktọpụ gị agaghị arụ ọrụ nke ọma.
Mara, ị nwere ike ịnwale GNOME, mana ọ ka nwere ike bụrụ enweghị amụma Wayland. Nke ka njọ, laghachi azụ GNOME Xorg.
Ozugbo ịbanye, ị ga-achọpụta Ihuenyo ihe omume anya agbanweela:
Ugbu a meghee Ntuziaka Ngwa, ị ga-ahụ ọbụna ihe ndozi na mgbanwe. Ọ naghị adị ka mma karịa?
Ị nwere ike ịchọta ozi ndị ọzọ gbasara GNOME arụnyere na Banyere UI eserese na sistemụ arụmọrụ Ubuntu 21.04 gị:
Ma ọ bụ ụzọ ọzọ ị nwere ike iji ihuenyo ngwá ọrụ iji lelee ụdị desktọpụ GNOME na nkọwa ndị ọzọ gburugburu desktọpụ gị.
N'ime nkuzi a, ị mụtala ka esi etinye PPA na modul kachasị ọhụrụ nke Gnome 40 na n'ọdịnihu 41+ na kwalite ndabere, wee wụnye ngwanrọ desktọpụ kacha ọhụrụ. Ụfọdụ n'ime mgbanwe ndị a na-ahụ anya bụ akụkụ windo gbara okirikiri, ihe nkiri dị nro nke na-enye ya ọdịdị ọgbara ọhụrụ n'etiti ọtụtụ mgbanwe ndị ọzọ GNOME 40 na-eweta.
N'ozuzu, GNOME 40 ga-etinye n'ime Ubuntu. Maka ndị chọrọ ịhụ ọnụ ọgụgụ kasị elu, lelee nke a n'ezie; Otú ọ dị, jide n'aka na ị nara nkwado ndabere na mpaghara n'ihi na nke a nwere ike imebi.
Categories Ubuntu Tags GNOME Mail igodo
Otu esi etinye Elasticsearch na Rocky Linux 8
2 echiche na "Otu esi etinye GNOME 40 na Ubuntu 21.04"
October 1, 2021 na 5: 26 pm
Nke a ga-ekwe omume na ubuntu 20.04 kwa
1- Wụnye ebe nchekwa x11 iji dozie ndabere gnome-shell.
2- Wụnye gnome-shell tupu nkwalite (Idozi desktọpụ agaghị ebu ibu)
sudo apt wụnye ubuntu-desktọpụ
* Ị nwere ike tinye ngwa-menu ma ọ bụ arc-menu site na iji ihe nchọgharị gị
3- Kwalite sistemụ gị
sudo apt nweta nkwalite
4- Malitegharịa ekwentị gị ma nwee ọ enjoyụ.
October 1, 2021 na 6: 03 pm
Ọ dị mma, daalụ maka ịgbakwunye kmux ahụ.